Madaxweynaha Tansaaniya ayaa su'aal ka keenay Qalabka lagu Tijaabiyo coronavirus kadib baaritaanka xoolaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Tansaaniya ayaa su’aal ka keenay Qalabka lagu Tijaabiyo coronavirus kadib baaritaanka...
Madaxweynaha Tansaaniya ayaa su’aal ka keenay Qalabka lagu Tijaabiyo coronavirus kadib baaritaanka xoolaha
Madaxweynaha Tansaaniya John Magufuli ayaa meesha ka saaray qalabka xirmooyinka baarista ama kit coronavirus inuu qalad yahay, isagoo sheegay inay soo noqdeen natiijooyin aan wanaagsaneyn oo laga soo qaaday tijaabo laga soo qaaday riyaha iyo pawpaw.
Magufuli ayaa hadalkan jeediyay xilli uu socday munaasabad ka dhacday Chato oo ku taal waqooyi-galbeed Tansaaniya Axaddii. Wuxuu sheegay inay jireen “khaladaad farsamo” oo la xiriira tijaabooyinka.
Madaxweynaha, oo ay dawladiisu horay u heshay dhalleeceyn ku saabsan inuu ka qarsoon yahay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana horay dadka reer Tansaaniya ka codsaday inay u duceeyaan coronavirus, ayaa sheegay inuu faray ciidamada amniga Tansaaniya inay hubiyaan tayada xirmooyinka qalabka lagu tijaabiyo xanuunka oo natiijo been ah sheegaya.
Waxay si aan kala sooc lahayn uga heleen dhowr muunad oo aadane ah, oo ay ka mid yihiin pawpaw, ari iyo ido, laakiin waxay u qoondeeyeen magacyo iyo da ‘aadamnimo.
Saamballadaas ayaa markaa kadib loo gudbiyay shaybaarka Tansaaniya si loogu baaro cudurka coronavirus, iyadoo farsamayaqaannada sheybaarka ay si ula kac ah uga warqabin asalkooda.
Muunado laga soo qaaday pawpaw iyo ariga ayaa laga helay COVID-19, madaxweynuhu wuxuu yidhi, isagoo intaas ku daray inay tani u muuqato inay dadka qaar laga baaray cudurka marka, runtii, aanu qabin cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’.
“Waxbaa jira ayaa jira. Horey ayaan u iri waa inaysan aqbalin in gargaar kasta loola jeedo inuu u fiicnaado umadan,” ayuu yidhi Magufuli, isagoo intaas ku daray xirmooyinka inay tahay in la baaro.
Sabtidii, Magufuli wuxuu ku dhawaaqay inuu soo saaray amar daaweyn dhirta loogu talagalay coronavirus uu ku xukumay madaxweynaha Madagascar.
“Waxaan mar hore warqad u qoray madaxweynaha Madagascar waxaanan dhawaan u diri doonaa diyaarad si aan u soo qaadno daawada si Tansaaniya sidoo kale ay uga faa’iideysato,” ayuu yidhi.
Daaweynta dhirta, waxaa loogu yeeraayaa “Covid Organics” oo ay soo diyaarisay Machadka Malagasy for Research Appured, waxaa laga sameeyay Artemisia, oo ah geed lagu beero jasiiradda Badweynta Hindiya ee Madagascar.
In kasta oo aynan haynin caddeyn cilmiyeed, haddana Madaxweyne Andry Rajoelina ee Madagascar wuxuu ku andacooday in dawaynta ay mar hore ka bogsatay qaar ka mid Madagascans-ka COVID-19. Ilmaha ku soo laabanaya iskuulka waxaa laga rabay inay qaataan.
Previous articleAXKAAMTA SOONKA – DERSIGA 2AAD
Next articleAmnesty: Suxufiyiinta Soomaaliya waxay la kulmaan qaab xun oo cadaadis ah
Madaxweynaha Koonfur galbeed oo gaaray magaalada Samareeb